अभय पाण्डे काठमाडाैं, ११ जेठ
कोरोनाका कारण पूरै देश त्रासमा छ । यो त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण सामाजिक सञ्जालमा पोखिने अभिव्यक्ति पनि हो । घरभित्र बसेर बाँच्ने कि बाहिर निस्केर मर्ने ? भनेर जसरी सञ्जालमा समस्यालाई ’फ्रेमिङ’ गरियो, त्यसले त्रासलाई उकास्ने काम गर्‍यो ।
घरभित्र बसे अवश्य बाँच्न सकिन्छ, सर्त यति मात्र हो कि त्यति बेलासम्म घरबाट निस्कनु भएन, जति बेलासम्म कुनै चमत्कार हुँदैन वा यसको प्रभावकारी ‘टिका’ निस्कँदैन । विज्ञहरूका अनुसार टिका बजारमा आउन कम्तिमा एक डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसमा पनि शंका नै छ ।
संसारमा अहिले पनि अन्य ६ थरीका कोरोना भाइरस छन् । तीमध्ये कुनैको पनि प्रभावकारी टिका अहिलेसम्म नै निस्केको छैन । टिका नआउञ्जेल हामी न तरकारी लिन जान भयो, न खाद्य सामग्री, न एटीएमबाट पैसा झिक्न, न औषधि नै लिन जानु भयो । किनकि एक पटक बहिरी सम्पर्कमा आउनेबित्तिकै संक्रमणको ढोका खुल्न सक्नेछ ।
कोरोनाबाट त शायद मुक्ति पाउन मुश्किल छ, विश्व स्वास्थ्यय संगठन (डब्लूएचओ) पनि त्यसै भनिरहेको छ । संसारमा अहिलेसम्म पत्ता लागेका कुनै पनि कोरोनाबाट मुक्ति पाउन सकिएको छैन । एकचोटि कुनै भाइरस मानव जातिमा सरे, त्यो रहिरहन्छ । सन् १९२० तिर फैलिएको स्पेनिस फ्लूको भाइरस अहिलेसम्म हामीबीच नै छ ।
हो, भाइरसहरू कालान्तरमा गएर त्यति खतरनाक हुन छोड्छन, जति सुरूमा हुन्छन् । भाइरसबाट पूर्ण मुक्ति सम्भव नभए पनि त्रासबाट चाहिँ मुक्ति सम्भव छ, किनकि त्यो कुनै जीव नै होइन । त्यो हाम्रो मनको उपज हो । केही समयअघि न्यूयोर्क टाइम्समा ‘महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ ?’ भन्ने विषयमा एक लेख प्रकाशित भएको थियो । इतिहासकारहरूका अनुसार, महामारीको अन्त्य दुई तरिकाले हुन्छः
१) चिकित्सकीय : जब चिकित्सकीय हस्तक्षेपबाट मृत्युदर घट्न थाल्छ ।
२) सामाजिक कारण : जब त्रासको महामारी घट्न थाल्छ, जीवाणुको उपस्थितिका बाबजुद ।
संसारमा अहिलेसम्म करिब ३ लाख ३० हजार मानिसको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । त्यो मृत्यु संख्यालाई चिरफार गर्ने हो भने के देखिन्छ भने त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत मृत्यु जम्मा छवटा देशमा मात्र भएको छ । अमेरिका मात्रको मृत्यु् संख्या करिब २८ प्रतिशत छ । अर्थात् संसारमा तीन जनाको मृत्यु हुँदा, त्यसमा एक जना अमेरिकी हुन्छ । त्यसभित्र पनि थप हेर्ने हो भने मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश ६० वर्ष कटेका, नर्सिङ होममा बस्ने, प्राणघातक रोग भएका, अत्यधिक मोटोपन (ओबेसिटी) भएका, निम्न आय भएका र जनघनत्व बढी भएको क्षेत्रमा बस्ने मानिस छन् ।
अब हाम्रो त्रास फैलाउने वर्ग सरसर्ती हेरौँ ।
४० वर्षमुनिका, घरमा ३ महिनाको रासनपानी स्टक र छ महिनाको खर्चबराबरको बैंक ब्यालेन्स भएका मध्यम वर्गीय नै देखिन्छन् । त्यसमाथि हाम्रा मिडिया थपिएका छन् । संसारमा कुन देशको मिडिया होला, जो एक जना संक्रमित थपिँदा समेत खबर बनाउँछ ?
युरोप र अमेरिकामा हुने मृत्यु संख्यामा अनेक प्रश्न चिह्न छ । डेथ विथ कोरोना (कोरोनासँग मृत्यु) र डेथ फ्रम कोरोना (कोरोनाका कारण मृत्यु) मा भिन्नता छ । कुनै मानिस कोरोना संक्रमित छ, तर उसलाई हृदयाघात भयो भने, त्यसलाई के कारणले मृत्यु भएको मान्ने ? संक्रमण या हृदयाघात् ? संसारमा मुटुको रोगका कारण वर्षेनि डेढ करोड मानिस मर्छन्, त्यसको अगाडि अहिलेसम्मको कोरोनाका कारण हुने मृत्यु खासै केही होइन ।
यही दरमा मृत्यु भए पनि कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ वर्षमा १० लाख भन्दा कम हुनेछ । संसारमा श्वास प्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट ३० लाख र फोक्सोको क्यान्सरबाट मात्र १७ लाख मानिसको ज्यान जान्छ । मानौँ, कुनै मानिस क्यान्सरपीडित छ, उसलाई संक्रमण पनि भयो र मृत्यु भयो भने कारण केलाई मान्ने ?
कुनै मानिस डायबिटिजको बिरामी छ । त्यसले गर्दा मुटुको नशा ब्लक भयो र हृदयाघात भयो । त्यसको परिणामस्वरूप फोक्सोमा संक्रमण भएर निमोनिया भयो र उक्त मानिसको मृत्यु भए दोष कसलाई दिने ? डायबिटिज, मुटु वा कोरोना ? साधारण फ्लूले पनि अमेरिकामा कुनै वर्ष ६० हजारसम्मको मृत्यु हुन्छ । जुन मानिसको फ्लूले मृत्यु हुन सक्ने थियो, उनीहरूको संख्या अहिले कोरोनाको मृत्यु संख्याबाट घटाउने कि नघटाउने ? विकसित देशहरूमा प्रमाणपत्रमा मृत्युको कारण पनि लेख्नुपर्दछ ।
अहिलेको अवस्थामा ‘कोरोना’ लाई दोषी देख्नु डाक्टरहरूका लागि सुविधाजनक छ भनेर कतिपय विज्ञहरू भन्छन् । तर, यसको मतलब विशुद्ध कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छैन भन्नेचाहिँ होइन । केवल यति मात्र हो कि सबै मृत्यु कोरोनाका कारणले नै हो भन्न सक्ने स्थिति होइन । अधिकांश मृत्युको कारण कोरोना संक्रमण ‘प्लस’ हो ।
हाल बेलायतमा निकै चर्चामा आइरहेका क्यान्सरविज्ञ प्राध्यापक सिकोराका अनुसार जो मानिसहरू मरे, तिनीहरूमध्ये अधिकांश त्यसै पनि मर्ने नै थिए । उनको अनुमान छ, युरोपेली देशमा कोरोना विस्तारै आफैँ थकित भइसकेको छ । हामीकहाँ (विशेष गरेर काठमाडौंमा) कोरोना लकडाउनपछि आएको हो या त्योभन्दा पहिले नै आइसकेको हो ? पहिले नै फैलिइसकेको भए धेरै जना संक्रमित भएर ठीक पनि भइसकेको हुनुपर्छ । ‘सेरोलोजिकल सर्वे’ बाट यो पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
के हामी सबै संक्रमित हुनेछौँ त ?
यस्तो सिद्धान्ततः सम्भव छैन । जब कुनै संक्रमणले जनसंख्याको ५०/६० प्रतिशत मानिसलाई भेट्दछ, त्यसपछि त्यस जनसंख्यामा ‘हर्ड इम्युनिटी’ को विकास हुन्छ र संक्रमण फैलिनबाट रोकिन्छ, किनकि किटाणुलाई असंक्रमित मानिस भेटाउन गाह्रो पर्छ ।
रकफेलर विश्वविद्यालयमा लामो समय बिताएका सोधकर्ता कनुट विटकाउस्की (जसले यसभन्दा अघिका महामारीको अध्ययन गरेका छन, र जो लकडाउनका घोर विरोधी पनि हुन्) का अनुसार सबै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी भाइरसहरू आ फ्नोलहर पार गरेपछि, आफैँ सुस्ताएर जान्छन् । उनका अनुसार लकडाउनले त्यो लहरलाई लामो समयसम्म फिँजाउने मात्र हो, रोक्ने होइन ।
के संक्रमित हुनेबित्तिकै मरिन्छ त ?
अहिलेसम्मको विश्व अनुभवले के देखाउँछ भने संक्रमित अधिकांश मानिसहरू विनाकुनै लक्षण वा एकदमै सामान्य लक्षणपछि आफैँ ठीक हुन्छन् । केही सामान्य उपचारबाट ठीक हुन्छन् । संक्रमितमध्ये एकदमै थोरैलाई विशेष उपचार चाहिन्छ । तीमध्ये पनि एकदमै थोरैको मात्र मृत्यु हुन्छ । यसको मृत्यु दर पनि सुरूमा प्रक्षेपण गरेअनुसार छैन ।
युरोपेली र अमेरिकी शहरमा गरेको सेरोलोजिकल सर्वेका अनुसार यसको मृत्युदर ०.२ देखि ०.९ प्रतिशत जति हुन आउँछ । भारतमा मृत्युदर अहिलेको अवस्थामा ३ प्रतिशत जति देखिन्छ । तर, त्यहाँ पर्याप्त परीक्षण हुँदैन, त्यसैले २ प्रतिशत मृत्युदर सही होइन । प्रति १० लाख जनसंख्यालाई नै कुनै संकेत मान्ने हो भने, भारतमा मृत्यु संख्या ३ जना मात्र छ, जबकि विश्व औसत ४० जना छ ।
भारतलाई जस्तै नेपाललाई पनि जनसांख्यिक लाभ छ । यहाँ ८० प्रतिशत मानिस गैरशहरी क्षेत्रमा बस्छन्, जहाँ संक्रमण कम फैलिन्छ, किनकि त्यहाँ जनघनत्व कम हुन्छ ।
नेपालमा करिब ५ प्रतिशत मानिस मात्र ६५ वर्षभन्दा माथिका छन्, जो यो संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्छन् । कोभिडको मृत्युदर पनि उमेर समूह हेरेर छ । ६० वर्ष कटेका प्राणघातक रोगले ग्रस्त मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण भएपछिको मृत्युदर ४ प्रतिशत जति छ । यही संख्यालाई अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने, यो उमेर समूहमा उपयुक्त उपचार पाए संक्रमित १०० जना मध्ये ९६ प्रतिशतलाई ठीक हुने सम्भावना छ ।
६० वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा मृत्युदर क्रमशः घट्दै जान्छ । भारतका अग्रणी महामारीविज्ञ मुलियलका अनुसार १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहमा १ लाख संक्रमित भए ३५ जना जतिको मृत्यु हुनेछ । १० वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर शून्य नभए पनि एकदमै नगन्य हुनेछ । त्यस कारण, जोगाउनैपर्ने ६० वर्षभन्दा माथिकालाई हो ।
के यो भाइरस भविष्यमा योभन्दा खतरनाक हुन्छ ?
कोरोना भाइरसमा कुन प्रकारको उत्परिवर्तन (म्युटेसन) हुँदै छ भनेर अहिले भाइरलविज्ञहरू अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, यसले भविष्यमा कस्तो रूप लिन्छ ? यो भाइरलविज्ञलाई पनि भन्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले, यो प्रश्नको उत्तर जीव विज्ञानमा खोज्नुपर्छ । भाइरस परिवर्तित हुन्छन, त्यो सामान्य कुरा हो । यसमा उल्लेख्य परिवर्तन भए भने त्यसलाई नयाँ ‘स्ट्रैन’ भनिन्छ ।
विश्वमा अहिले कोरोनाका कति थरी ‘स्ट्रैन’ छन्, त्यसको यकिन छैन । यद्यपि, उत्परिवर्तनचाहिँ भएको छ । कुनै ‘स्ट्रैन’ योभन्दा बढी खतरनाक भएर निस्कन्छन्, कुनै कम खतरनाक । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कोरोना श्वासप्रश्वाससम्बन्धी भाइरस हो, जुन ‘स्ट्रैन’ ले मानिसलाई मार्दछ, त्यो ‘स्ट्रैन’ आफैँ पनि मर्छ र आफ्नो जनसंख्या फैलाउन पाउँदैन, किनकि यो फैलिन श्वास फेर्नु आवश्यक हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, जुन ‘स्ट्रैन’ ले मार्दैन, त्यो आफैँ पनि जीवित रहन्छ । ‘सर्भाइबल अफ द फिटेस्टको’ सिद्धान्त भाइरसलगायत सबै जीव, परजीवीमा लागू हुन्छ । कोरोना भाइरसको त्यही स्ट्रैन ‘फिट’ हुनेछ, जसले आफूलाई प्रश्रय दिने ‘होस्ट’ लाई कमसेकम क्षति पुर्‍याउनेछ । यो सिद्धान्त विशेष गरेर श्वासप्रश्वाससम्बन्धी भाइरसमा लागू हुन्छ ।
संक्रमितलाई कसले बचाउँछ ?
करिब ८० प्रतिशत संक्रमित मानिसलाई उनीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले आफैँ बचाउँछ । यिनीहरू अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा सिटामोल खाएर केही समयपछि घर फर्कन्छन् । अहिले त हाम्रा क्वारेन्टाइन आफैँ संक्रमणको ‘हटस्पट’ पो हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ ।
खैर, धेरैमा संक्रमणको कुनै लक्षण देखिँदैन, उनीहरू पत्तै नपाई आफैँ ठीक हुन्छन् । बाँकीलाई साधारण उपचारले ठीक बनाउँछ । करिब ५ प्रतिशतलाई मात्र विशेष उपचारको आवश्यकता पर्छ । विशेष उपचार चाहिने भनेको बुढाबूढी र गम्भीर रोगीलाई हो । त्यसैले, देशको स्वास्थ्यय प्रणालीलाई अत्यधिक भार पर्न नदिन पनि ती वर्गलाई संक्रमण हुनबाट बचाउन जरुरी छ । यसमा राज्यको होइन, परिवारको अहम् भूमिका हुन्छ ।
लकडाउन किन लगाइन्छ ?
आममानिसलाई लाग्छ कि, लकडाउन उनीहरूलाई संक्रमणबाट बचाउन लगाइन्छ । घरबाट निस्कँदै ननिस्की बस्ने हो भने ठीकै हो । यदि कोही घरबाट बाहिर निस्कन्छ (कुनै पनि कारणले) भने ऊ संक्रमणको जोखिममा परिहाल्छ । लकडाउनबाट मात्रै संक्रमण निर्मूल पारिएको उदाहरण संसारमा छैन । भारतमा त्यस्तो कठोर लकडाउनका बावजुद हालसम्म संक्रमितको संख्या घटेको छैन ।
सीमा जोडिएका देश छन् भने त लकडाउन मात्रले संक्रमित हुनबाट बचाउन निकै नै गाह्रो हुन्छ । बेलायतमा लकडाउन लगाउँदा नारा नै थियो– ‘प्रोटेक्ट एनएचएस’ अर्थात् राष्ट्रिय स्वास्थ्यय सेवालाई बचाऔँ, ताकि अस्पताललाई भार नपरोस् । लकडाउनको उद्देश्य हो, बक्रलाई सोझ्याउनु । यदि संक्रमितको संख्या बढ्दै गए त्यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा भार पर्छ भन्ने हेतुले लकडाउन लगाउने हो । संक्रमितको संख्या एउटा निश्चित सीमालाई पार गर्ने देखेपछि मात्र लकडाउन लगाउने हो । चार जना संक्रमित भेटिनेबित्तिकै लकडाउन लगाउने होइन । त्यसमाथि जतिजति टेस्टको दायरा बढायो, त्यति धेरै संक्रमित भेटिनेछन् । धेरै संक्रमितले कुनै लक्षण देखाउँदैनन् ।
यस्तो अवस्थामा कति जनाको पीसीआर टेस्ट गर्ने ? फेरि पीसीआर टेस्टमा आज नेगेटिभ आए पनि, त्यो संक्रमणविरुद्ध कुनै प्रत्याभूति होइन । पीसीआर टेस्ट गरेको केही दिनपछि पनि त संक्रमण हुन सक्छ । अनि कति चोटि पीसीआर टेस्ट गर्ने ? हामी ढुक्क हुनुपर्ने आरडीटीबाट हो । आममानिसलाई लाग्छ, लकडाउन विज्ञानमा आधारित उपचार हो । तर लकडाउन र विज्ञानको कुनै सम्बन्ध छैन । सामाजिक दूरी वैज्ञानिक हो । लकडाउन भनेको त्यही सामाजिक दूरी कार्यान्वयन गर्ने कठोर विधि मात्र हो । तर, लकडाउन सधैँका लागि राख्न सकिँदैन ।
लकडाउनमा क्रमशः ढिलाइ नदिने हो भने गैरको भीड बिरामी सामान्य उपचारसमेत नपाई मर्नेछन्, अर्थतन्त्र धराशयी हुनेछ र सामाजिक आशान्ति बढ्नेछ । केही समयअघि नेपालमा ५ सय जना मानिसले लकडाउनको अवधिमा आत्महत्या गरेको समाचार आएको थियो । यो लकडाउनको ‘साइड इफेक्ट’ हुन सक्छ । ५ सय मानिसको कोभिडका कारण ज्यान जान कारिब ५० हजार मानिस संक्रमित हुनुपर्दछ ।
अहिले सरकारले कोरोनाका कारण मदिराको उत्पादन र वितरणमा रोक लगाएको छ । जो मानिस मदिरामा आश्रित छन्, (एल्कोहल डिपेन्डेन्ट) उनीहरूको ‘विथड्रल’ का कारण ज्यान जान सक्छ । तिनीहरूको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ ?
वर्षौंदेखि करको लोभमा मानिसलाई रक्सी ख्वाईख्वाई आश्रित बनाएर, अहिले २/४ दिन नखाए केही हुन्न भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवार वक्तव्य दिन मिल्छ ? त्यसै पनि सामान्य मात्रामा सेवन स्वास्थ्ययका लागि हानिकारक होइन । बरू चुरोटको एक खिल्ली खाए पनि हानिकारक हो । त्यसो त, चिनीले मुटुको रोग निम्त्याउँछ । त्यसलाई पनि उत्पादन र विक्रीवितरणमा रोक लगाए भइगयो नि ।
नुनले रक्तचाप बढाउँछ, त्यो पनि ब्यान्ड गरे भयो । तरकारी र बालीमा विषादीको प्रयोग हुन्छ, त्यो पनि ब्यान्ड गरे भयो । गाडीले वायु प्रदूषण हुन्छ, जसका कारण हरेक वर्ष विश्वमा ७० लाख मनिसको ज्यान जान्छ । गाडी ब्यान्ड नै पनि ब्यान्ड गर्नुपर्‍यो । यसको सुरूवात नेताहरूले गाडी त्यागेर, साइकल चलाउनुपर्‍यो । स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ । हाम्रो स्वास्थ्यको अनावश्यक चिन्ता गर्ने नेताहरूले आफ्नो स्वास्थ्य पनि त ठीक राख्नुपर्‍यो नि । कुरा के हो भने, सरकार नैतिकताको ढोँगी ठेकेदार हुनु भएन ।
त्यसमाथि लकडाउनका कारण उपचार वञ्चित मुटु र क्यान्सरका बिरामीको हालत के हुनेछ ? त्यो भविष्यले बताउने नै छ । बेलायतमा गरिएको अध्ययनअनुसार यो साल क्यान्सरका बिरामीले समयमा उपचार नपाएर, ७५ हजार क्यान्सर बिरामीले अकाल ज्यान गुमाउनेछन् । हाम्रो सरकारले यसबारेमा केही सोचेको छ ? सरकारले आफ्नो मूल दायित्व बिर्सनु हुँदैन ।
सरकार भनेको कोभिड चिकित्सक होइन, नीति निर्माता हो । उसले कोभिड समस्याका साथसाथै गैरकोभिड स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्या सबैलाई ध्यानमा राखी अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ । लकडाउन एकैचोटिमा हटाउन सकिँदैन, तर कहिलेसम्म राख्ने, कुन अवस्थाको राख्ने ? कुन अवस्थामा पुनः लकडाउन लगाउने, यस विषयमा सरकारको प्रस्ट नीति हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, लकडाउन अकर्म हो । परीक्षण, उपचार र नागरिकको स्वअनुशासन कर्म हो । सरकारसँग अनुरोध छ– कि त सन्तोषजनक मात्रामा टेस्ट गराओस्, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरोस् । ‘रेन्डम सेरोलोजी टेस्ट’ गरोस् । जसबाट कतै लकडाउनभन्दा पहिल्यै काठमाडौंलगायतका शहरहरूमा संक्रमण फैलिइसकेर कुनै स्तरको ‘इम्युनिटी’ विकसित भइसकेको अवस्था त होइन भन्ने थाहा होस् ।
यस्तो अध्ययनले नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ र मानिसको त्रास कम गर्न सक्नेछ । बिहान र साँझ फराकिलो सडकमा ब्यायाम हेतु ‘वाक’ गर्न चाहने मानिसलाई प्रशासनले बन्देज नलाओस् । यसले आममानिसको मानसिक तनाव कम गर्नेछ र स्वास्थ्य बलियो बनाउनेछ । गाउँशहर स्मसानघाटजस्तो होइन, गाउँशहरजस्तै नै लाग्नेछ । त्यसै पनि सामाजिक दूरी कायम राख्यो भने ‘वाक’ बाट संक्रमण फैलिने सम्भावना हुँदैन । सामाजिक दूरी कायम राख्न बरू अनिवार्य छाता ओढ्नुपर्ने र मास्क लगाउनुपर्ने नियम नै बनाओस् ।
मानिस आफ्नो सवारी साधनमा चक्कर लगाउन चाहन्छन् भने त्यसमा रोकावट नहोस् । सवारी साधनमा चक्कर लगाएर घर फर्कन्छन् भने त्यो समस्या होइन । समस्या गाडी चलुञ्जेल होइन, ओर्लेर भीड भए मात्र हो । सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ निषेध गरियोस् । आममानिसका लागि लकडाउन खुकुलो पार्ने प्रस्थान बिन्दु यी कुराहरू हुन सक्छन् । यसबाट त्रासको वातावरण कम हुनेछ । बाँकी लकडाउन क्रमशः हटाउँदै जाओस् । पुनः लकडाउन लगाउनुपरे संक्रमितको संख्या होइन, अस्पतालमा चाप हेरोस् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ११, २०७७, १०:२७:००
नेपाल इटाली बन्छ कि लकडाउनपुर ?